VaMpofu Vobvunzurudzwa neKomiti yeParamende neNyaya yeMandoda
Zvichakadaro dare remakurukota rinoti rakabvumirana kuti makambani maviri e Canadile ne Mbada ari kuchera mangoda kwa Marange, aenderere mberi nokuita mabasa awo kwaChiadzwa.
Gurukota rinoona nezvemigodhi, VaObert Mpofu, vamiswa neChitatu pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvicherwa vachibvunzurudzwa maererano nemachererwo ari kuitwa mangoda ekwaMarange. VaMpofu vabvunzwawo nezve makambani ari kuchera mangoda kuti akaunzwa sei pamwe nekuti vakuru vakuru vemakambani aya, vakasarudzwa zviri pamutemo here.
Zvinonzi VaMpofu vati hapana zviri kunze kwemutemo zvakaitwa, uye makambani ari kuchera mangoda aya akatotambirwa nedare remakurukota.
Vatiwo kambani yehurumende, yeZimbabwe Mining Development Corporation, haisi kunyatsoita basa rayo nemazvo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa.
Nyaya yekuti makmbani ari kuchera mangoda akawana rutsigiro rwemakurukota, yatsigirwa negurukota rezvekurongwa kwehupfumi, VaElton Mangoma.
VaMangoma vati ichokwadi kuti dare remakurukota rakabvumirana kuti makambani maviri e Canadile ne Mbada Diamonds ari kuchera mangoda kwa Marange, aenderere mberi nokuita mabasa awo kwaChiadzwa.
Va Mpofu vakaudza vatori venhau neChipiri kuti dare remakurukota rakatora danho iri mushure megwaro rakagadzirwa nemakurukota anosanganisira gurukota rezvemari, Va Tendai Biti, VaMangoma, gurukota remaindasitiri, Va Welshman Ncube, pamwe negurukota rekudzivirirwa kwenyika, naVa Emmerson Mnangagwa, naivowo Va Mpofu.
Va Mangoma vati kunyange hanzvo dare remakurukota rabvuma nyaya iyi pachine basa kugadzirisa nyaya yekwaMarange.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda ne Institute for a Democratic Alternative Zimbabwe, Va Joy Mabenge, vanoti zvaitwa nedare remakurukota zvinogona kukanganisa hurongwa hwekomiti yedare reparamende iri kuita ongororo pamusoro penyaya yemangoda ekwa Marange.
Hurukuro naVa Joy Mabhenge